Iwo mashanu anozivikanwa epamhepo ekubhadhara mapuratifomu | ECommerce nhau
Encarni Arcoya | | Nzira dzokubhadhara
Tevere tinoda kutaura zvishoma nezve iyo 5 inonyanya kuzivikanwa online yekubhadhara mapuratifomu ayo aripo izvozvi uye izvo zvinogona kushandiswa chaizvo kubhadhara pasina kusiya imba.
3 3. Kubhadhara kweAmazon
Zviri pamusoro Google inobhadhara pamhepo sevhisi mairi maungaita mari yekuchinjisa uyezve kubhadhara. Google munguva pfupi yapfuura yakazivisa kuti ichapa chaiyo kadhi yakabatana nemaakaundi maakaundi kuti vakwanise kushandisa Google Wallet muzvitoro zvekutengesa.
Google Wallet inongowanikwa muUnited States, kwaunogona kubhadhara pamhepo uchishandisa nharembozha yako. Zvinoitwa nechikumbiro kuchengetedza makadhi echikwereti nemabhangi aunofanirwa kuita semurevereri pakati peanobhadhara uye anogamuchira mari. Ndeupi musiyano uripo nemamwe mapuratifomu ekubhadhara, sezvo mashoma kwazvo, nekuti mune ino ruzivo (kureva makadhi ako) ichave iri mugore, zvakachengeteka, uye ivo havazokubhadharise chero komisheni yekuishandisa.
Vazhinji vanogona kufunga kuti Google Wallet yakafanana neGoogle Pay, asi chokwadi ndechekuti haisi. Iwo ari maviri maviri akasiyana akasiyana mafomu ane akasiyana mashandisiro.
Mune ino kesi, Google Wallet iri chaizvo, uye sezita zvarinoratidza, chikwama, zvinoreva kuti iwe unogona kuwana chiyero chekutumira, kana kugamuchira mari kubva kushamwari uye mhuri.
Asi, mune iyo nyaya ye Google Pay, muchokwadi ichi chishandiso chinoshandiswa kubhadhara muzvitoro, kwete mune zvese, asi mune izvo izvo muripo uyu unowanikwa kuburikidza neapp.
Ehezve, kuti uishandise, iwe unofanirwa kunyoreswa neGoogle ine account yekambani iyi.
Para muchos, iyo online yekubhadhara chikuva par kugona, imwe yeanonyanyo shandiswa pasirese ane anopfuura anopfuura 137 mamirioni anoshanda maakaunzi munyika 193 uye mune makumi maviri nemaviri emari. NePayPal zviri nyore kwazvo kutenga pamhepo usingabve pamba, inotova neyayo nharembozha yekushandisa maneja ese kubva kufoni.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti akawanda akawanda ekubhadhara mapuratifomu akaonekwa, PayPal ichiri imwe yeanonyanya kushandiswa. Ehezve, ine zvimwe zvisina kunaka (uye zvikonzero nei vazhinji vakachinjira kune mamwe mapuratifomu). Uye, sekureba sekubhadhara kuri pakati peshamwari, uye munyika imwechete, hapana komisheni, asi kana zvasvika pakubhadhara kutenga kana kutumira mari kunze kwenyika, pane komisheni iyo, dzimwe nguva, iwe unofanirwa kuibhadhara. vese vanotumira neanogamuchira.
Neichi chikonzero, vazhinji vanosarudza kushandisa imwe svikiro.
Pazvakaonekwa, zvaive zvitsva kuti ugone kubhadhara pasina kupa rako bhangi kana kiredhiti kana kadhi kadhi, asi chete neemail yako inopfuura kukwana kubata kubhadhara kana kutumirwa kwemari. Naizvozvo, vazhinji vanoishandisa.
Nhasi, zvakare ane chikumbiro maneja kubhadhara kuburikidza nhare uye kune akawanda online uye eCommerce zvitoro izvo, pakati penzira dzadzo dzekubhadhara, ndiPayPal (kunyangwe mune dzakawanda dzinoita mutengi atsigire komisheni yekubhadhara).
Imwe yemabhenefiti makuru ePayPal ndeye, pasina mubvunzo, rutsigiro rwayo rwevatengi. Uye ndezvekuti, kana chigadzirwa chakatengwa chikasagamuchirwa, kana pakaitika chiitiko, kana zvisiri izvo zvaitarisirwa, vanogona kubata kudzoserwa kwemari. Zvinotora chinguva, asi chero bedzi uri kutaura chokwadi, ivo vanoguma vokupa iwe zvawakabhadhara.
3. Kubhadhara kweAmazon
Ndicho yakachengeteka uye nyore kushandisa online kubhadhara system, zvakare zvakareruka kwazvo kune ivo vanofanirwa kugamuchira mari nekushandisa iyo Amazon API. Vashandisi vanogona kana kutumira mari kuburikidza neiyo Automated Clearing House system, yakakosha kana iine account yeAmazon.
Amazon Kubhadhara, kana zviri nani kuzivikanwa ikozvino seAmazon Pay, neimwe nzira inotevera Paypal base, uko, panzvimbo pekushandisa email kana yako bank ruzivo, izvo zvaunofanira kupa ingori yako Amazon account.
Mune mamwe mazwi, zvaunoita ndizvo Amazon inoshanda semurevereri kuti ikwanise kubhadhara ipapo ipapo pane peji raunoda (uye bvuma iyi nzira yekubhadhara, hongu).
Sezvakaita Paypal, kune mari uye mari. Semuenzaniso, kana iwe ukanyoresa semutengesi, pane komisheni yechiitiko chega chega chinoitwa (zvinoitwa nevazhinji ndezvekuti mutengi anoibhadhara, zvingave zvizere kana zvishoma).
Vamwe vanofunga kuti maAmazon Payments idombo rePayPal, uye chokwadi ndechekuti havana kunyengerwa zvakanyanya. Asi chaunofanira kuchengeta mundangariro ndechekuti Amazon Pay inosvika yakawanda kupfuura PayPal sezvo parizvino kunyoreswa kweAmazon pachako kuchibvumira iyo nzira yekubhadhara mahara, inova iyo yekuwedzera.
Icho chimwe che kunongedza vakwikwidzi vePayPal iyo inobvumidza vashandisi kuendesa mari kuburikidza neemail, nhare mbozha, Facebook, LinkedIn kana Twitter. Chinoita kuti sevhisi iyi inakidze ndechekuti hapana mari dzekutamisa dziri pasi pe $ 10, nepo dzekuchinjisa pamusoro peichi chiyero, mari yacho inongova $ 0.25 chete.
Imwe yeanonyanya kufarirwa online ekubhadhara mapuratifomu aripo nhasi ndiDwolla, mukwikwidzi uyo, zvakare, anotevera hwaro hwePaypal. Uye ndezvekuti mune ino kesi, sevhisi iyi inomira kubva kune vamwe mukuti hazvidiwe kushandisa makadhi echikwereti, chinhu chakakosha mune vese vatakambotaura kwauri kare.
Yakazvarwa mu2008 muDes Moines, Iowa, muUnited States, kunyangwe kuvhurwa kwayo kuri muna 2010.
Chii chaunoshandisa saka kana asiri makadhi echikwereti? Zvakanaka, iyo akaundi yebhangi. Chinangwa hachifanirwe kuvimba nekadhi rechikwereti kuti ushande paInternet, asi kuve nechombo chinobvumidza kubhadhara ipapo ipapo kunyangwe iwe usina kadhi Uye, sekuziva kwako, kana iwe uchibhadhara nekuchinjisa kubhangi, kudzamara mari yagamuchirwa ivo vanotanga kugadzirira odha.
Dambudziko rega raunogona kuona neDwolla nderekuti haazi mazhinji mabhizinesi epamhepo anoziva nezvazvo kana kuti akamboshandisa senzira yekubhadhara, saka dzimwe nguva zvinogona kuoma kuishandisa.
Uyu online yekubhadhara chikuva inoshanda kubvira 1996 uye nhasi kune vatengesi vanopfuura mazana matatu nemakumi matatu nemakumi mashanu ezviuru vanobhadhara anodarika mamirioni makumi masere nematanhatu mumabasa akachengetedzeka egore vachishandisa makadhi echikwereti uye macheki emagetsi.
Authorize.Net ine maBhaibheri maviri akasiyana, kune rumwe ruoko iyo yemahara, uye kune imwe vhezheni yakabhadharwa, iyo inogona kutengwa kubva pamadhora makumi maviri nemashanu pamwedzi. Pakati pezvimiro zvekuratidzira kwepuratifomu iyi yekubhadhara, iko kubhadharisa kwepamhepo, kugona kubhadhara nekadhi rechikwereti, pamwe nekutarisa zvemagetsi uye kunyangwe neyekubhadhara nhare.
Uye zvakare, iyo inopa kutaridzika kwekubhadharwa kwemwedzi pamwedzi uye kuendeswa kwemari uye inokutendera iwe kuti utarise uye utarisise mashandisirwo ekumisikidza kana paine chero izvo zvingave zvekunyepedzera kana kufungira.
Iyo ine, semamwe mapuratifomu, a vatengi maawa makumi maviri nemana, mazuva makumi matatu nemazana matatu pagore. Inonyanya kutariswa kumakambani, e-commerce zvitoro, nezvimwe. nekuti, pakati pevanhu, hazvizivikanwe sevamwe.
Ehezve, ine dambudziko rinogona kuita kuti iwe uzvisarudzire, kana kuti usashandise. Uye ndeyekuti pakati pemidziyo yayo pakombuta, Apple uye Android, asi inongowanikwa muUnited States, Canada, United Kingdom, Australia, China neIndia. Uye zvakare, ipuratifomu inowanikwa chete muChirungu. Izvi zvatove zvinogumira basa rayo zvakanyanya uye ndicho chikonzero nei kuSpain, kana muEurope zvese, hazvizivikanwe zvakanyanya (kunyangwe iri imwe yevakuru).
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Nzira dzokubhadhara » Iwo mashanu anozivikanwa epamhepo ekubhadhara mapuratifomu
Elena Alcantara akadaro
Pindura kuna Elena Alcántara
Ini ndoziva yeimwezve nzira isinganyanyo kufarirwa asi masevhisi ayo akanaka kwazvo! Inodaidzwa kuti Cardinity, ine makwikwi emitengo uye vatengi vayo vanoteerera uye vane hushamwari. Sarudzo inonyanya kuzivikanwa haisi kugara yakanyanya kunaka.